YEYINTNGE(CANADA): Thursday, November 04
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/04/20100အကြံပြုခြင်း
ကျွန်ူပ်တို့ တိုင်းပြည်၏ လူမျိုးဘာသာ ၊ သာဿနာသည် မသမာသူ လူ့မိစ္ဆာတို့၏ ယုတ်မာပက်စက်သော
အကြံဆိုးများ ၏ နှိပ်စက်မှု အောက်တွင် အဖက်ဖက်က ဆုတ်ယုတ်နေသည် ။ ယခုမျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာအလယ့်အတွင် မြန်မာနိူင်ငံသည် နံမည်ဆိုး အမျိုးမျိုးဖြင့် ကျော်ကြားလျှက် ရှိသည့် အပြင် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကိုယ့်ကျင့်သီလ တို့သည်လည်း ငွေကြေးနှင့် လဲစားခံလိုက်ရသည် ။
အသိညဏ်ကို သစ္စာစောင့်သိသည့် မိုးခါးရေ မသောက်ချင်သည့် ပညာရှင် အများစုကလည်း လက်ရှိအာဏာရှင်များ နှင့် မဆက်ဆံလိုကြတော့ ။ မှားနေတာကို မှားပါလို့ ထောက်ပြသူများကို နေရာပေးလေ့ မရှိကြ ၊ ပညာရှင် အဖြစ် အသုံးမချ လို ၊ ထိုအခါ ပညာရှင်တို့၏ နေရာတွင် ပညာရှင် အမည်ခံ ကိုယ်ကျိုးရှာလိုသူများက လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်တို့ ဘာလုပ်လုပ် အဟုတ်ဟု မြှောက်ပေးကာ
နေရာ ယူလာကြသည် ၊ အာဏာရှင်တို့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် တိုင်းပြည်ကို မတရားစိုမိုး အနိူင်ကျင့်ဗိုလ်ကျ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ ယနေ့ လက်ရှိ ကျွန်ူပ်တို့ နိူင်ငံအခြေအနေကို တွေ့ရှိရမှာပါ ။
မြန်မာနိူင်ငံ တိုင်းတပါး နယ်ချဲ့တို့ လက်အောက်တွင် သူ့ကျွန် ဘ၀ သို့ရောက်ရှိခဲ့ရသည့် အကြောင်းတရားမှာ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သည့် ခေါင်းဆောင်များ ပညာ အားနည်းသော ကြောင့် ဖြစ်သည် ။ ထိုအချိန်မှ စ၍ မြန်မာနိူင်ငံကြီးသည် သည် နယ်ချဲ့တိုင်းတပါးတို့ လက်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ သူ့ကျွန်အဖြစ် နွံနစ်ခဲ့ကြရပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းနေ့များကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရသလို အာဇာနည် သူရဲကောင်းမှန်သမျှ အကျိုးခံစားခွင့်ကို မခံစားရဘဲ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ရင်နင့်ဖွယ်ရာ တိုင်းပြည် အတွက် စတေးခံသွား ခဲ့ရရှာသည် ။ သူရဲကောင်းတွေက စွှန့်ပြီး မစားခဲ့တော့ ကိုယ်ကြိုးရှာလိုသူ တစ်စု က မစွှန့်ဘဲ စားနေကြရတယ် ။ ဒီလို မတရားသိမ်းပိုက်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ အဆီအနှစ်ကို စားရတာ လူတွေ လက်မခံနိူင်မှန်းသိတော့ ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရွေးကောက်ပွဲ အမည်ခံ ကျင်းပပြီး လူထုဆီက အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို တပါတ်ရိုက်ပြီး ရယူဖို့ကြံစည်တာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြည်သူလူထု သိရှိအောင် အဆိပ်ရှိတဲ့မြွေဟာ အရေခွံလည်းလိုက်ပေမယ့် သူ့အဆိပ်က သတ္တ၀ါတွေ သေကြေစမြဲ ဆိုတာကို သိရှိအောင် ရှင်းပြဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူရဲကောင်းတွေသာ ကျဆုံးခဲ့ရတယ် တိုင်းပြည်ကတော့ အကျိုးမခံစားရဘဲ လူမိုက်တွေက ပိုပြီး ကောင်းစားလာကြတယ် ။ ဒီလို အမှန်တရားရဲ့ ဘက်တော်သားတွေ ကျရှုံးလာတဲ့ အရင်းအမြစ်ကို လိုက်ရှာကြည့်တော့ သူရဲကောင်းကိုသာ အားကိုးပြီး ကိုယ်တိုင်သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေ နည်းပါးနေသေး တဲ့အပြင် ကြားနေ၀ါဒကို ကျင့်သုံးတဲ့ လူတွေများလာလို့ဆိုတာကို သိမြင်လာတယ် ။ ဒါကြောင့် သူရဲကောင်း စိတ်ဓါတ်များ မွေးမြူပေးကြပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို လက်ကိုင်ထားပြီး လူထုကို တတ်နိူင်သမျှ လိုက်လံ ရှင်းပြခဲ့တယ် ၊ သူရဲကောင်း ဖိတ်စာတွေပို့ပေးခဲ့တယ် ။
သူရဲကောင်း ဖိတ်စာကို ရရှိတဲ့ လူတွေထဲက သူရဲကောင်း စိတ်ဓါတ်ကို ကိုယ်တိုင်မွေးမြူကြတဲ့ လူနည်းစုက ပြည်သူလူထုကို တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးများကို လိုက်လံမေးခဲ့ကြတယ် ။ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လို ချစ်သင့်တယ်ဆိုတာ လမ်းပြပေးခဲ့တယ် ။ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သင့်တိုင်းပြည် အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိူင်သလဲ ဆိုတာကို လိုက်လံ ညွှန်ပြ ပေးကြပြန်တယ် ။ အဲဒီ အချိန်မှာ သူတို့ သုံးတဲ့ စကားလုံးလေးတွေမှာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး ပါလာတော့ လူထုက အဲဒီ စကားလုံးကို သိပ်နားလည် ချင်လာကြတယ် ။
အဲဒီခါမှာ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လက်ရှိ မြန်မာပြည် အကြောင်းကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရှင်းပြခဲ့တယ် ။ ဘာကြောင့် လက်ရှိ အစိုးရက ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံ မတည်ဆောက်စေချင်တယ် ဆိုတာကို အရိုးရှင်းဆုံး စကားလုံးလေးတွေ သုံးပြီး လူငယ်တွေ သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။ လူငယ်တွေ ကို ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံကို မြင်ယောင်လာအောင် လမ်းပြခေါ်ဆောင်ဖို့ အတွက် ကကြီး ခခွေး နိူင်ငံရေး သမားလေးတွေ ဖြစ်အောင်
အရင် လမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကကြီးခခွေး နိူင်ငံရေး သမားလေးတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်လို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်း စောင့်ရှောက်ကြဖို့ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေ ကြောင့် အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိူးကာ မဟုတ်လျှင် မခံ ၊ မတရားလျှင် တွန်းလှန်လိုသည့် သွေးမျိုးဆက်များ ရှင်သန် ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါသည် ။
သွေးမျိုးဆက်တွေရဲ့ ခွန်အားကို အသုံးချပြီး တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလူထု ကြားက ဆက်နွယ်မှုကို လူတိုင်း သိရှိနားလည်စေလိုတဲ့စေတနာနဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလူထု ရဲ့ဆက်စပ်ပုံ ၊ ဟိုယခင်က တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ယခုတပ်မတော်သားတွေ ကွာခြားပုံတွေကို ဥပမာလေးများနှင့် ရှင်းပြပေးခဲ့တယ် ။ ဒီလို ကွာခြားတဲ့ အမူအကျင့်စရိုက်တွေကြေင့် ပြည်သူလူထုက တပ်မတော်ကို သဘောထား အမြင်များ ပြောင်းလာခဲ့ပုံ ၊ လက်ရှိတပ်မတော်သားတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေက လွတ်မြောက်ဖို့ ပြည်သူလူထုနဲ့ လက်တွဲသင့်တဲ့ အကြောင်းကို အားလုံး နားဝင်အောင် ထပ်မံကြိုးစား ပြခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနေ့ နိူင်ငံရေးသမား တွေ တင် မကဘူး ပြည်တွင်းက လူတွေက ပြည်ပကလူတွေကို အမြင် သိပ်မကြည်လင်ကြဘူး ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးလို့ ပြည်ပကို ထွက်ခွာပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတာကို အပြစ်မြင်နေကြတယ် ။ ဒါတင် မကသေးဘူး ပြည်ပကို ရောက်မှ နိူင်ငံရေး လုပ်တာကို အပြစ်ပြောချင်ကြတယ် ။ ပြည်ပရောက် နိူင်ငံရေး သမားတွေကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ပတ်သိမ်း ပြီး ရမ်းယုံသာ မကဘူး ၊ သမိုင်း အမှားတွေကို လူငယ်တွေ ထွေပြားအောင် လမ်းမှားကြီးကို ညွှန်ပြနေကြတယ် ။ ဒါကြောင့် လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် လူပီသအောင် နေထိုင်ဖို့သာ အဓိက ဆိုတာကို လိုက်လံ နိူးဆော်ပေးခဲ့ပါသေးတယ် ။
တကယ်တော့ လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲကို သဘောထားတွေ ကွဲလွဲနေတယ်ဆိုတာ အမြင်မှားတွေ လက်ခံထားကြလို့ပါ ။ ဘာကြောင့် အမြင်တွေ မှားနေရတယ်ဆိုတာကို သေချာစွာ ရှင်းပြခဲ့ပါ ယုံသာမက ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှားတယ် ဆိုတာကို သဘာဝ အမှန်ရှုထောင့်က လူတိုင်း နာလည်းလာအောင် တင်ပြပေးခဲ့ပြီး အမြင်မှားကိုလက်ခံထားကြသူများရဲ့ အကြောင်းကို ဝေဖန် ပိုင်းခြားပြခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလို အမြင်မှားတွေကို လက်ခံထားကြတဲ့လူတွေဟာ သူတို့ အသိညဏ်ကို ငါဆိုတဲ့ အတ္တ မျက်မှန်နဲ့ တပ်ပြီး ကြည့်လေ့ရှိတော့ သဘာဝ အမှန်တရားကို မမြင်နိူင်ကြဘူးပေါ့ ။ သူတို့တွေကို အမှန်နဲ့အမှားကြားက ကာခြားထားတဲ့ နံရံပါးပါးလေးကို ဖောက်ထွက်ဖို့ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အသိညဏ်ကို အားမနာတမ်း ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သုံးသပ်သင့်ကြောင့် အကြံပြု တင်ပြ ပေးခဲ့ ပါသေးတယ် ။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ လူပီသတဲ့ လူသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ လုပ်စရာက တစ်ခုတည်း ရှိပါတယ် ။ အများကောင်းစားရေးကို ရှေှးရှု တိုင်းပြည် အကျိုးကို ရည်မျှော်လို့ တိုက်ပွဲခေါ်ရာကို တစ်စိုက်မတ်မတ် လိုက်ကြရအောင် တမျိုးသားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တစ်ခုတည်းသော လမ်းစဉ်နောက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ လိုက်ကြမှာ သာလျှင် စစ်မှန်တဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို ဖော်ဆောင် နိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာနိူင်ငံက ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူထု နှင့် ကျောင်းသား များပါ မကျန် တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် ကို လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖော်ကာ သူရဲကောင်း စိတ်ဓါတ်များ ကိုယ်တိုင် မွေးမြူကြ၍ ကျရာ အခန်းဂဏ္ဍကနေ နိူင်ရာ တာဝန်ထမ်း ကြလျှင် မကြာခင် ကျွန်ူပ်တို့ တိုင်းပြည် အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးအောက် လွတ်မြောက်၍ ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံ တည်ဆောက် နိူင်မည်မှာ အသေအချာပါဟု စွဲမြဲ ယုံကြည်လျှက် တိုက်ပွဲဝင်ကြပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်း နိူးဆော်လိုက်ရပါသည် ။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှ ဆောင်းပါး ခေါင်းစဉ်တွေကို အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ တိုက်ပွဲခေါ်သံ တပုဒ် ဖြစ်သွားတာပေါ့ ။ မိတ်ဆွေ သင်မြန်မာနိူင်ငံသား တစ်ယောက်ဟု ခံယူထား၍ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ခဲ့လျှင် သင့်မိတ်ဆွေများကို ဆက်လက် ဖြန့်ဝေပေးပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ
အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ တိုင်းပြည်ကို ချစ်သည့် စိတ်ဖြင့် အများသူငါ သိရှိလာအောင် ဖြန့်ဝေပေးကြည့် သူရဲကောင်း အပေါင်း နှင့်တကွ မြန်မာနိူင်ငံ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲဝင်ရင် အသက်စွှန့်သွားကြရရှာသော အာဇာနည် သူရဲကောင်းများ ကို ဒီနေရာလေးကနေ လေးစားစွာ ဂါဝရ ပြုလိုက်ပါတယ် ။
( အရေခွံ လဲပွဲ )
( သူရဲကောင်း စိတ်ဓါတ်များ ကိုယ်တိုင် မွေးမြူပေးကြပါ )
( သူရဲကောင်း ဖိတ်စာ )
( တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား )
( သင့်တိုင်းပြည် အတွက် သင်ဘာလုပ်ပေးနိူင်သလဲ )
( ဒီမိုကရေစီ နှင့် မြန်မာပြည် )
( ကကြီး ခခွေး နိူင်ငံရေး သမား )
( သွေးမျိုးဆက်တို့ ရှင်သန်လာပြီ )
( တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူလူထု )
( လူပီသအောင် နေထိုင်ကြစို့ )
( အမြင်မှားကို လက်ခံထားကြသူများ )
( တစ်ခုတည်းသော လမ်းစဉ် )
( တမျိုးသားလုံး လွတ်မြောက်ရေး )
( တိုက်ပွဲဝင် ဖို့ အသင်ပြင်ထားကြပါစို့ )
( တိုက်ပွဲသာ ၀င်လိုက်ကြပါစို့ )
4 Nov 2010 ဒိုင်ယာရီ
4 Nov Yeyintnge's Diary
Nov. 6: Canada-wide Day of Action against Sham Elections in Burma
Canadian Friends of Burma, November 4, 2010
Burma supporters and activists across Canada are holdingaday of action on Burma in protest of sham elections in Burma. Please see detailed info below.
Ottawa: Human Rights Monument (at Elgin Street and Lisgar)
Time: 1pm, Nov. 6, 2010
Contact: Nisha Toomey (613-883-6409)
Vancouver: Library Square (at Robson and Homer)
Time: 11am Nov. 6, 2010
Contact: Mahn Bee Du (778-317-7222); Joie Warnock (604-785-9363); Tony Chan (604-725-5197); Mike Orders: (604- 219-3163)
Saskatoon: City Hall, Saskatoon
Time: 12 noon, Nov. 6, 2010
Contact: Helen Smith-McIntyre (306-717-5110), or Nay Linn Oo (306-341-4687)
Calgary: The Peace Fair, 3303 Capitol Hill Crescent NW (near University of Calgary)
Contact: Shauna Jimenez (403-220-1030)
The Burmese military government is holding elections on Nov. 7, 2010 in the absence of international monitoring and media freedom while holding more than 2,200 political prisoners in bar and continuing human rights violations unabated. For the junta, holding the elections is the final step of their ‘roadmap’ for so-calleda‘disciplined democracy.’
However, it is notasolution for protracted political stalemate that requires ‘dialogue’ and ‘national reconciliation’– but rather an attempt to cement the military rule that is already the fundamental problem of social, political and economic stigmas in Burma.
It is now much clearer that the military-backed political party ‘USDP’ and its affiliates are set to win in the elections by means of intimations, bribery and fraud. Therefore, the current election in Burma is not only not meeting the lowest level of international standards, but also isaprocess of legalizing the military rule that is against the democratic principles and the desire of Burmese people in the establishment ofafree, democratic and prosperous country.
NLD News Bulletin - October 2010
မိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ရန် သားငယ် ဗီဇာလျှောက်
နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းစေ့မဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့နိုင်ဖို့အတွက် သားငယ်ဖြစ်သူ ကိုထိန်လင်း ခေါ် ကင်မ် အဲရစ်ဟာ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် မနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့က မြန်မာစစ်အစိုးရ သံရုံးမှာ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်စား သားငယ် ကိုထိန်လင်း ခေါ် ကင်မ် အဲရစ်က ဆာခါရော့ဗ် လူ့အခွင့်အရေးဆုကို ဥရောပ ပါလီမန်တွင် ၁၉၉၁ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့က လက်ခံယူနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တွင် ရပ်နေသူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကွယ်လွန်သူ ခင်ပွန်း ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် အဲရစ် ဖြစ်သည်။ (Photo: AFP)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က လွတ်လာမယ်လို့ အများက ယူဆထားပါတယ်။ ကိုထိန်လင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကွယ်လွန်သူ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် အဲရစ်တို့ရဲ့ သား ၂ ဦးထဲက သားငယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုထိန်လင်းဟာ အခုအခါ အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ဧပြီင်္လ မှာတုန်းက နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှု အထူး အယူခံကို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ကြားနာခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့နေတွေကတော့ အယူအခံအမှုအရ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ပြန်လွတ်နိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
အလားတူပဲ - ပြည်ထောင်စုဆိုတာက တပြည်ထောင်စနစ်လား၊ ခွဲထွက်ခြင်းမရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်လား၊ ဒါဆိုရင် အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တွေ အဆိုတွေ၊ သဘောထားတွေကို တင်ရမှာပဲ။ ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ နောင်ကို ဆက်ပြီး ဘယ်လုိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေ လုပ်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်ဆိုတာ ၁၉၈၉ နှစ်ဆန်းမှာကတည်းက ကြေညာလိုက်ပြီ။ အဲသည်အချိန်မှာ အင်န်အယ်ဒီက ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်၊ မ၀င်မယ် ဘာမှ မပြောသေးဘူး။ သို့သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ကတော့ - အဲသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာမှာ ဘယ်သူပဲ နိုင် နိုင်၊ အနိုင်ရပါတီဟာ လွှတ်တော်ရဲ့ ကမကထပြုချက်နဲ့ ညီလာခံတခု ခေါ်ရမယ်။ အဲသည် အမျိုးသားညီလာခံခေါ်ခေါ် ဘာခေါ်ခေါ်ပေါ့ကွာ၊ အဲသည်မှာ လွှတ်တော်ပြင်ပက တုိုင်းရင်းသားတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်မယ်။ ကျယ်ပြန့်အောင် ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ အဲသည်ကနေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်တဲ့ ကွန်စတီကျူးရှင်းကို ရေးဆွဲရမယ်။ အဲသည်ဖွဲ့စည်းပုံ ဒီမုိုကရေစီအခြေခံဥပဒေနဲ့ အညီ ပြည်သူဆီကို ပြန်သွားမယ် လုို့ ပြောခဲ့တယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ အနိုင်ရတဲ့လွှတ်တော်ဆိုတာက ၄ နှစ် သက်တမ်းတွေ ဘာတွေ စောင့်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲသည်တုန်းက ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့ ကမကထပြုမှုနဲ့ အမျိုးသားညီလာခံတခုကို လွှတ်တော်အမတ်တွေကော၊ ပြင်ပက တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေကော အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရရှိတဲ့ အခြေခံဥပဒေတခုကို ဆွဲမယ်။ အဲဒါရတာနဲ့ အဲသည် ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်တဲ့ အာမခံတဲ့ အခြေခံဥပဒေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ပြည်သူတွေဆီကို ပြန်သွားမယ်လို့ သဘောထား၊ စာတမ်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ရှိတယ်။
မြန်မာ့အတိုက်ခံတို့မှ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီ
November 4, 2010 freedom news group
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ နှင့် ခရီးသွား ဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ဦး ကို ကျိုင်းတုံမြို့ မဈေးကြီးဉ် တွေ့ ရစဉ်
အောင်မြင်၊ ၊နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများကို မြန်နိုင်ငံသို့ အလည်လာရောက်ခြင်းမပြုခြင်းဖြင့် စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက် ကြရန် ၁၉၉၆ မြန်မာစစ်အစိုးရဲ့ မြန်မာ့ခရီးသွားနှစ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်မှ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ပြည်သူအပေါ်စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေနားလည်သိရှိနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားသားများ မြန်နိုင်ငံသို့ ပိုမို လာရောက်လည်ပတ်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘ၀၊လက်ရှိအနေတွေသိရှိနားလည်လိုအပ်ကြောင်း ကို တိုင်းမဂ္ဂဇင်းသို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသော ဟိုတယ်၊ဧည့်လမ်းညွှန်၊အမှတ်တရအရောင်းဆိုင် တွေက ယ္ခုကဲ့သို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်တွေလာရောက်လည်ပတ်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ခြင်းအပေါ် ကြိုဆိုထောက်ခံကြပြီး သူတို့ရဲ့အမြင်ကို FNG သို့ အခုလိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဧည့်လမ်းညွှန်တဦးက ကျွန်တော်ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ခဲ့တာ ၁၂နှစ်ရှိပါပြီ။ အမေရိကန်လူမျိုး၊အင်္ဂလိပ်မျိုးခရီးသွားတွေအများဆုံးလိုက်ခဲ့ရတယ်။သူတို့တတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား တွေမြန်မာပြည်မလည်ကြဖို့ အကြောင်းကို ဧည့်သည်အားလုံးနီးပါးနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူမျိုး ၂ မျိုးဟာ လူအခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကို အရမ်းလေးစားလိုက်နာကြပြီး သူတို့တတွေဟာ မြန်မာနိုင် ငံအတွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတာကို သိချင်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ငွေတွေဟာ စစ်အစိုးရသက်တမ်းရှည်ရေးထောက်ပံ့မှုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို ဒီအကြောင်းနဲ့ပါတ်သက် ပြီး နယ်မြို့လေးတွေမှာ ညစာစားရင်း ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေမြန်မာပြည်ကို လာမလည် ဖို့ပိတ်ပင်မှုတွေကို ကျွန်တော် ဧည့်လမ်းညွှန်တယောက်အနေနဲ့ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တခု သတ်မှတ်ဖို့လိုကြောင်း၊ ကျူးဘားနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပေမယ့် ကက်စ်ထရို အုပ်ချုပ်ရေးကိုမပြောင်း လည်းနိုင်ဘဲ ပြည်သူတွေအတိဒုက္ခရောက်နေရကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်ကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ငွေဟာစစ်အစိုးရကိုအကျိုးပြုတာအလွန်နည်း ကြောင်း အမြဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားတွေ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ၀င်ကတည်းက ဗီဇာကြေး၊ရွှေတိဂုံ၊ အမျိုးသားပြတိုက်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရား၊ ကျောက်မျက်ပြတိုက်၊ ပဲခူး-ပုဂံ-မန္တလေး-အင်လေးဇုံဝင် ကြေး တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ဒေါ်လာ၁၀၀ မကျော်ကြောင်း၊ ဒီငွေလောက်လေးစစ်အစိုးရကိုထောက်ပံ့ လိုက်ရပေမယ့် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ယနေ့ခံစားနေရတဲ့ လူမှုရေး၊နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကို ‘ မင်းတို့ရဲ့ သားသမီးဆွေမျိုး၊သူငယ်ချင်းတွေရှင်းပြပြီး မင်းတို့ရဲ့လူမှုဝန်းကျင်ကတဆင့်အစိုးရကနေကမ္ဘာကသိပြီးငါတို့နိုင် ငံကိုကယ်တင်နိုင်ကြောင်းတွေ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတယ်တွေ၊ခရီးသွားအေးဂျင့်တွေ၊စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ အမှတ်တရအရောင်းဆိုင်တွေက အခွန်ငွေဟာစစ်အစိုးရဆီကိုအနည်းဆုံးရောက်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားကုမ္မဏီတွေဟာ ခရီးသွားတွေဆီက ရတဲ့ငွေကြေးတွေဟာ ထိုင်း(သို့)စကာင်္ံပူနိုင်ငံတွေရဲ့ဘဏ်တွေမှာ ဘဲရှိပြီး စစ်အစိုးရကိုပေးဆောင်ရမယ့်စာရင်းမှာ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိလျော့ပြီးပြကြကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်က ပေးဆောင်တဲ့အခွန်ငွေဟာ စစ်အစိုးရအတွက် အလွန်နည်းပြီး သက်ရောက်မှုမရှိပေမယ့် ဧည်သည်တွေလာရောက်တဲ့အတွက် မြန်မာ့ပြည်သူတွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ကမ္ဘာကသိဖို့ ဆောင်ရွက်နိုင်တာမို့ ဧည်သည်တွေလာတာကို ထောက်ခံပါတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ရပါတယ်။ ဧည်သည်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မိုဘိုင်းဖုန်းတလုံး ကိုဒေါ်လာ၃၀၀၀ကျော်၊ နောက် ၂၀၀၀ကျော် ပေးဝယ်ရကြောင်းတွေ၊ အီးမေးလ်အကောင့်တခုကို ငွေပေးဝယ်ရတာ တွေဟာ သူတို့ အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကြောင်းတွေပါ။ စစ်အစိုးရရဲ့ သဘာဓါတ်ငွေ့ကရတဲ့ဝင်ငွေတွေဟာ ဘီလျံနဲ့ချီရှိနေပေမယ့် ပြည့်သူအပေါ် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးနေသလည်းဆိုတာတွေရှင်းပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ ရန်ကုန် ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်ကြီးမှာ ညစာစားနေတုန်းမီးပျက်ခဲ့တာတွေဟာ စစ်အစိုးရဲ့ ပြည်သူ့အပေါ် ဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့ ပြယုဂ်တခုပါ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဦးဝင်းတင် နိုင်ငံခြားသားတွေ ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဝင်းတင်ထောင်ထဲမှာ နှစ်အကြာကြီးနေခဲ့ရချိန်မှာ အပြင်မှာရှိတဲ့ NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေ ၊ပြည်ပကအတိုက်အခံတွေ ကသာ ဒီထက် ၁၀နှစ်လောက်စောပြီး ဒီလို သဘောထားမျိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ရင် မြန်မာ့ပြည်တွေအပေါ် စစ်အုပ်စု ရက်စက်စွာဖိနှိပ်မှုတွေကို ကမ္ဘာကပိုသိပြီး ခုချိန်လောက်ဆို တခုခုပြောင်းလည်းမှုတခုခုရှိနေပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဧည့်သည်တွေကို ပြောပြပါတယ် ဦးတေဇရဲ့ဟိုတယ်၊လေကြောင်းလိုင်း၊ ခရီးသွားအေ့ဂျင့်တွေကို မသုံးဘဲ တိုင်းရင်းသားပိုင်တွေမှာ ခင်ဗျားတို့ငွေတွေသုံးတာအကျိုးရှိပါတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ တော်တော်နောက်ကျသွားပြီဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာကျောက်မျက်နဲ့အမှတ်တရဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကတော့ကျမတို့ဆီကပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ ၀ယ်လို့ စစ်အစိုးရဆီအခွန်ငွေအများကြီးမရောက်ပါဘူး။ ဘာလို့မရောက်တာလည်းဆိုတော့ ဒေါ်လာ၁၅၀၀ တန်တဲ့ပစ္စည်းကို လေဆိပ်မှာပြဖို့ဘောင်ချာမှာ ဒေါ်လာ ၁၅၀ထက်ပိုမရေးဘူးလေ၊ အခွန်က၁၀ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ ၁၅ဒေါ်လာဘဲပေးရတာပါ။ ဧည့်သည်ကို သူတို့ရဲဂိုက်က ရှင်းပြီး ပစ္စည်းတန်ဘိုးအစစ်မှန်ဘောင်ချာကို လေဆိပ်မှာမပြဘဲ သေချာထားဖို့ဆိုပြီး ဘောင်ချာ ၂စောင်ပေးလိုက်တာလေ။ ကျမတို့ စစ်အစိုးရကိုမကြိုက်ပါဘူး၊ အတိုက်အခံကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုNLDကနိုင်ငံခြားတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကြောင့် ဧည်သည်တွေပိုများလာမယ်လို့ထင်ပါတယ် လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရှိ ဟိုတယ်ကြီးတခုက ဧည့်ခံကြိုဆိုရေးကောင်တာဝန်ထမ်းတဦးကတော့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေဟာအထူးသဖြင့် အမေရိကန်လို အနောက်နိုင်ငံက ဧည့်သည်တွေဟာ စစ်အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက်ပါတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအားမပေးပါဘူး။ သူတို့သိကြပါတယ်။ ကျွန်တော် အတွေ့ကြုံအရ ဘယ်ကုမ္မဏီနဲ့မှမဆက်သွယ်ဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုလာတဲ့တယောက်က ကျွန်တော်တို့ ကောင်တာကို ပုဂံသွားဖို့ လေယာဉ်မှတ်စီစဉ်ခိုင်းပါတယ်။ ခရီးသွားရာသီဖြစ်လို့ မန္တလေးလေကြောင်းလိုင်း လက်မှတ်က သူသွားချင်တဲ့ရက်မရပါဘူး၊ ဦးတေဇပိုင်တဲ့ ပုဂံလေကြောင်းက လက်မှတ်ဘဲ အဲဒီရက်ရမယ်လို့ ပြောပြတော့ သူက ဒီလေကြောင်းလိုင်းကိုလုံးဝမစီး နိုင်ဘူး ဆိုပြီး မန္တလေးလေကြောင်းလိုင်းကရမယ့်ရက်ကို ၅ရက်လောက်စောင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ သူရဲ့ငွေနဲ့ စစ်အစိုးရတိုက်ရိုက်ပါတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေးကို အားမပေးကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေကြောင့် စစ်အစိုးရယန္တရားမလည်ပါတ်နိုင်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ ဧည့်တွေပိုများလာတာကိုမြင်ရပြီး အရပ်သားအစိုးရကိုမြင်ချင်ပါတယ်။ရချင် ပါတယ်။ အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကတော့ ဘာမှ ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ချက်ကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး လို့ သူငယ်ချင်းအခြင်းခြင်းပြောဆိုနေကြချိန်မှာ ဒီလို အတိုက်အခံကနေ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကြောင့် ၀မ်းသာမိတယ်ဗျာလို့ FNG ကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ http://freedomnewsgroup.com/
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/04/2010 1 အကြံပြုခြင်း
ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 03 နိုဝင်ဘာ 2010
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ ကျနော်အမြင် ပြောရရင်တော့ အခုဒီအမှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာ အပြစ်ချထားတဲ့ဟာကို အယူခံတာကို ကိုင်တွယ်ပုံကို ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်ပြီးတော့ မြန်ဆန်လွန်တယ်။ အစတုန်းကတော့ လေးလလောက် pending ထားပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လက ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၉ သိပ်ပြီးတော့ စိတ်တဲ့အတွက် အခုလို ခပ်စိတ်စိတ်ဆိုရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်တောင် လွတ်နိုင်တယ်လို့ ကျနော်တို့ တွက်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို ခြုံပြီးတွက်တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ လွတ်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ တွက်တယ်။ နိုင်ငံတကာ အခြေအနေ၊ ပြည်တွင်းအခြေအနေတွေနဲ့ နောက်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ခံလာရတဲ့ကာလတွေ အားလုံးခြုံပြီး စဉ်းစားရင် လွတ်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ စစ်အစိုးရဟာ သူတို့ဘက်က သိပ်လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားမှု ရှိနေတယ်ပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲကပ်ပြီးတော့ လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ရွေးကောက်ပွဲ တစုံတရာ ဘာမှ မဖြစ်သွားနိုင်တော့ဘူးလို့ သူတို့ ယုံကြည်တယ်လို့ ဆရာတွက်ပါသလား။ ထင်ပါသလား။
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ ကျနော်တော့ မထင်ဘူး။ သူတို့က မယုံကြည်လို့သာ။ ကျနော်တို့ အန်အယ်လ်ဒီ က ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဘူး၊ မှတ်ပုံမတင်ဘူး ပြောပေမယ့်။ ကျနော်တို့ ရုံးနဲ့ ကျနော်တို့လူတွေ အနောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး ကြည့်တဲ့အလုပ်က ပိုပြီးတောင် အရင်ထက်များသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့က သူတို့ကိုသူတို့ လုံခြုံပြီလို့ ဒီလိုယူဆမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒါဆိုရင် သူတို့ လွတ်ရဲတယ်။ လွတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ လွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်ရဲတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အတိုင်အတာတော့မသိဘူး။ အပြောင်းအလဲတော့ ရှိလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပြည်သူလူထုကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မျှော်လင့်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့မှာပဲ။ သေချာတဲ့ကိစ္စကတော့ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့မယ့်အလုပ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အလုပ်ဆိုပြီး သူလုပ်လိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီမှာ ပြောင်းလဲမှုတော့ တချို့  ရှိနိုင်တာပေါ့။ အတိုင်အတာတော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ လူတွေကလည်း ဒါကို နိုင်ငံတကာကလည်း အများကြီးတွေ့နေရပါတယ်။ နောက်တခုက ကြားဖြတ်မေးရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာက အကဲဖြတ်အဖွဲ့တွေကို လက်မခံဘူး။ ဒါအပြင် ကျနော်တို့ သတင်းသမားတွေကိုလည်း ပြည်တွင်းလာရောက်ပြီး သတင်းယူခွင့်မရှိဘူး။ ပြည်တွင်းက သတင်းသမားတွေကိုလည်း အင်မတန် ကန့်သတ်တားဆီးထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ရင် ဆရာတို့က ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဘယ်လိုခြားနားပါသလဲ။
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ အပြောင်းအလဲ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ အခု ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သဘောတူတဲ့ကိစ္စတွေပဲ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပြောင်းလဲစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်တယ်ဘာညာ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  သဘောထားကိုတဆင့် စကားသာပြောခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း သူတို့လည်း ကိုယ်တိုင်တွေ့ကောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အဲဒီလို တွေ့ခွင့်ရနိုင်မယ် အလားအလာ ရှိပါသလား။ အဲဒီအပေါ်မှာ သူတို့ဘက်က တစုံတရာ ပြောင်းလဲသွားနိုင်မလား။
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ အခု ရွေးကောက်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရ။ ကျနော်တို့ မဲပေးမယ့်လူမဟုတ်ရင် ကိုက် (၅၀) အတွင်း မဝင်ရတို့။ သတင်းသမားလည်း မဝင်ရ။ ဒီစည်းကမ်းတွေအရဆိုရင်။ မဲရုံးကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ကျနော်တို့ သတင်းသမားတွေနဲ့ အပြင်က ဆက်သွယ်မယ့် သတင်းသမားတွေ၊ ပြည်တွင်းသမားတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးမယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်လည်း ကျနော်တို့က ဦးကျော်ဇံသာ တို့သိတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံတော် တရားရုံးချုပ်မှာလည်း အန်အယ်လ်ဒီအတွက် အမှုတွေ တင်ထားတယ်။ ဒီအမှုတွေအတွက် ရုန်းပမ်းရမယ်။ ဒီအမှုတွေအတွက် လုံးပမ်းရမယ်ဆိုတာ အန်အယ်လ်ဒီ ရပ်တည်ရေးအတွက် လုံးပမ်းရမယ်။ အန်အယ်လ်ဒီ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်လည်း ညီညီညွှတ်ညွတ်နဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေ ပြောင်းလဲရေးကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ့် ဦးတည်ချက်ပေါ့။
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားရင် ဘယ်လောက်ကြာမှ အစိုးရဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကျနော်တို့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဘယ်ဖြစ်လို့ မပြောနိုင်သလဲဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၂၄ - က) အရ။ အဲဒီ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အပြီး နောက်တကြိမ် ကျင်းပမယ့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို နအဖ က ဆက်လက်ကိုင်ထားတယ်။ Limitation မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ အစိုးရ ဆိုတာ တော်တော်ဝေးတယ်လို့ ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းတယ်။ နောက်တခုက အစိုးရဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်လာရင် အဲဒါကလည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ သမ္မတရဲ့  အစိုးရပဲ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့  အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအခြေအနေကို ကြည့်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကလည်း အဲဒီအချိန်ရောက်မှ ပိုမိုသဘောပေါက်လာနိုင်မယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဒီအတိုင်း မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်တခုက ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပြီ သူတို့ ဖွဲ့လိုက်တဲ့ အစိုးရ သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျဖွဲ့လိုက်တဲ့ အစိုးရပေါ်လာသည်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ လုပ်လက်စ နိုင်ငံတချို့ က အခွင့်အကောင်း ရလာတာပေါ့။ ဒါရွေးကောက်ပွဲအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရတရပ်နဲ့ ဆက်သွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ အာဆီယံ တို့က။ အဲဒီအခါမှာ လူလတ်တန်းစား အရေအတွက်ဟာ စီးပွါးရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်း အပြောင်းအလဲဖက်ကို ဦးတည်လာမယ်လို့ တချို့ ကလည်း တွက်ကြပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲ။
ဦးဥာဏ်ဝင်း ။ ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ အပြောင်းအလဲ မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့မှာလည်း ဘာမှ အပြောင်းအလဲမရှိဘူး။ အခုနလို လမ်းတွေပွင့်လာပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ယူဆတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုကြပါစို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လွတ်လာတယ် ထားပါအုံးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ထားရှိတဲ့သဘောထားက တစုံတရာ ပြောင်းလဲသွားစရာ မရှိပါဘူး။ တချိန်တည်းမှာလည်း စစ်အစိုးရဘက်ကလည်း သူတို့လုပ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ချမှတ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တဖက်သတ် လုပ်ရပ်တွေကို ပြောင်းလဲပြုပြင်စရာအကြောင်းလည်း လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ ပြည်သူလူထု တကယ့်မျှော်လင့်တောင်းတတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ပြည်သူ့ဘဝ သာယာဝပြောရေးဆိုတာကတော့ ဆက်လက်ပြီး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်ဝေး ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း။
Nov. 6: Canada-wide Day of Action against Sham Ele...
မိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ရန် သားငယ် ဗီဇာေ...